Ikhamera IQ: Sebenzisa ukungathandwa kwabathelisi esikubona okungokoqobo (i-AR) Ukwenza i-Virtual Product Try-Ons | Martech Zone
Ikhamera IQ, ipulatifomu yokwakhiwa kwamakhodi we-Reality ye-Augmented (AR), sethule Umqambi Wokuzama Okubonakalayo, ithuluzi lokuklama lesimanje elenza lisheshe futhi libe lula ngemikhiqizo yezobuhle, ezokuzijabulisa, ezokuthengisa kanye neminye imikhakha ukwakha izinto ezintsha Ukuzama i-Virtual-On okususelwa ku-AR nakho. Isixazululo esisha sicabanga kabusha ukuhwebelana kwe-AR ngokunika amandla imikhiqizo ukuthi ifake idijithali emikhiqizweni yabo ngokunemba kwangempela kwangempela kanye neqiniso ngenkathi ingeza izinto eziningi ezinophawu nokuqhakaza okuyingqayizivele okubandakanya nokukhuthaza abathengi ngamakhamera abo.
Ngenkathi ezinye izixazululo zidinga ukubhala isikhathi nezindlela zokumisa ezinzulu noma ukukhiqizwa okubanzi nentuthuko, i-Camera IQ's Virtual Try-On Composer yenza kube lula ukuthi ama-brand akhe okuhlangenwe nakho okuyinkimbinkimbi, okwenziwe ngezifiso okungokoqobo (i-AR) ngesilinganiso ngesikhathi esincane, nge akudingeki ukufaka ikhodi. Ithuluzi linikezela ngezinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso ezinikeza imikhiqizo ukuguquguquka ukwenza ngezifiso kalula i-AR ngemingcele ethile enjengombala, ukuma, ukuthungwa, ukuqeda, nokuningi. Noma bangavele balayishe amamodeli wabo we-3D, nefayela le- Umqambi Wokuzama Okubonakalayo ihumusha ngokuzenzakalela imikhiqizo kwikhamera ukuze ikwazi ukufakwa kunoma imuphi umkhankaso.
Ngokungafani nezinye ubuchwepheshe bokuzama, ku Ikhamera IQ, imikhiqizo ingathuthukisa okuhlangenwe nakho kwayo kwe-Virtual Try-On ngamalungu afanayo wezinto zokuqhafaza ezenzelwe ukuthuthukisa ukuzibandakanya, ukusebenzelana, nokwabelana. I-Virtual Try-On Composer iza nomtapo wolwazi wezifanekiso ezikhethiwe ezenzelwe ukufeza izinhloso ezithile zebhizinisi njengokukhulisa ukuqwashiswa kokuqaliswa komkhiqizo, ukushayela ukuthengisa ngokubona komkhiqizo nokusebenzisa, ukufundisa amakhasimende ukuthi uwusebenzisa kanjani umkhiqizo wawo, nokuningi. Amabhrendi angenza ngezifiso lezi zifanekiso zesipiliyoni se-AR, futhi aze aklame nezici ezisebenzisanayo kokuhlangenwe nakho kwabo ngokungeza izimbangela zemiphumela ebonakala noma izenzo ezizokwenzeka ezintweni ezithile ezibangela, njengomsebenzisi ovula umlomo wakhe noma ngokuthepha into ethile. Ikhamera IQ ibese ithumela okuhlangenwe nakho kwe-AR esikalini kuyo yonke i-Facebook, Instagram, Snapchat, namanye amapulatifomu, enika izethameli ithuba lokuvula ukuzwakalisa kwabo kokudala ngenkathi bezama imikhiqizo yomkhiqizo cishe.
Ukukhishwa kwakamuva kweKhamera IQ kuyashintsha umdlalo weqembu lami. I-UI entsha inembile kakhulu futhi iguquguquka ngokweqile. Amandla wokwengeza izimpahla ze-3D nokuzisebenzisa endaweni eyiqiniso ye-3D yenza sikwazi ukuthatha ukwenziwa kwethu kokudala siye ezingeni elilandelayo ngokushesha futhi kalula.
UDoug Wick, uMqondisi Wokwakhiwa Kokuqukethwe eNestlé Purina eNyakatho Melika
Ikhamera IQ Virtual Zama-On Umqambi
Ikhamera IQ inika amandla imikhiqizo ukuthi ihlanganyele izethameli futhi ithengise imikhiqizo cishe kuyo yonke indawo yokuthinta yohambo lwamakhasimende. Besebenzisa ipulatifomu yabo yokwakha engenamakhodi yezentengiselwano ye-AR, abathengisi bangaguqula imikhiqizo yabo nomyalezo womkhiqizo ube yimizwa ecebile engathandwa kwabathelisi esikubona yemikhankaso yokuzama nokuzama yemikhankaso yabathengi kwezenhlalo.
Njengethimba lomhlaba wonke elenza izinhlobo zomhlaba ezifana neViacom, iAtlantic Records, iNestle, i-EA, i-MAC Cosmetics, Away, nokuningi, iCamera IQ isebenza kuzo zonke izimboni ukubandakanya izigidi zabathengi nsuku zonke.
Akungabazeki ekusebenzeni kwe-AR kuma-try-ons we-virtual, kepha lokho kumane kuyisiqalo salokho i-AR engakwenza ukuletha imikhiqizo nezethameli zayo zisondelane. I-AR ayikwazi kuphela ukuqhuba ukuhwebelana kwezenhlalo ngokusiza abathengi ukubona ngeso lengqondo imikhiqizo, kepha ibenza bakwazi ukusebenzisana nemikhiqizo ngezindlela ezintsha ngokuphelele ngesenzo sokwakha ngokubambisana. Lapho ama-brand eshada nokusetshenziswa nobumnandi be-AR, kulapho babona khona umthelela omkhulu ku-ROI yabo: amazinga okuzibandakanya akhuphuka, kanye nethuba lokuguqulwa lenyuka ngama-250%. Sethule i-Virtual Try-On Composer ezosiza imikhiqizo ukusheshisa isu labo lezentengiselwano, izithiyo zentuthuko eziphansi, futhi ikwenze kube lula ngokumangazayo ukwakha umuzwa osebenzayo nohehayo we-AR. Manje noma yimuphi umkhiqizo ungaba ngumdali we-AR!
U-Allison Ferenci, u-CEO kanye nomsunguli we-Camera IQ
Ukubungaza ukwethulwa komkhiqizo wayo omusha we-Virtual Try-On, iCamera IQ ibambisene nosaziwayo nabaculi bezimonyo abawine imiklomelo kubandakanya UDavid Lopez, UKeita Moore, UDoniella Davy, Futhi U-Erin Parsons ukudala ukubukeka kwedijithali okuphindaphinda ubuciko bendabuko bokwenza. Izinhlobo zobuhle zinganika amandla izethameli zazo ukuthi zizame kunoma iyiphi inhlanganisela ye-lipstick, blush, eyeshadow, eyeliner, eyelashes, noma izesekeli, konke okunemibala engokoqobo, ubujamo, ukuthungwa, ukuqeda, nezinye izinto ukufanisa imikhiqizo yabo yangempela.
Imikhiqizo yabathengisi ingenza kalula imikhiqizo yabo ebonakalayo ukwenza amakhompiyutha ukudala okwenziwayo okuvumela abathengi ukuthi babone ngeso lengqondo ukuthi imikhiqizo yabo izovela kanjani emhlabeni wangempela, noma imikhiqizo yomculo ingavumela abalandeli ukuthi baphinde benze ukubukeka kwesiginesha yomculi kusuka kwikhava yevidiyo noma ye-albhamu. Ububanzi bokuhlangenwe nakho kwe-Virtual Try-On okungakhiwa kuComposer IQ's Composer akunamkhawulo.
Zama i-AR yekhamera ye-IQ Cela i-Demo
Tags: Ukungathandwa kwabathelisi esikubonaikhamera iqezokuhweba ngekhompyuthaukuzama umkhiqizoukuzama umkhiqizo ongokoqoboUmqambi Wokuzama Okubonakalayoubuchwepheshe bokuzama